Home » 2017 NAB ပြရန် » အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာမော်ကွန်း Solutions
အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာမော်ကွန်း Solutions
အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြပွဲဒစ်ဂျစ်တယ်သိမ်းဆည်းဖြေရှင်းနည်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကုမ္ပဏီများသည်သက်သေခံပစ္စည်းများကိုနှင့်ကွန်ဖရအစီအစဉ်တွင်ထင်ရှားသောခဲ့ကြသည်။ အတိတ်ကာလများတွင်ကြေးစားမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအကြောင်းအရာရုပ်ရှင်သို့မဟုတ် Analog စဗီဒီယိုတိပ်ခွေအပေါ်မော်ကွန်းတင်ခံခဲ့ရသည်။ ယနေ့တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ archive ကိုမီဒီယာများအတွက်ရရှိနိုင်သည့် Option အဦးစားပေးများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် archive ကိုအဆောက်အဦ၏တည်ဆဲအခြေခံအဆောက်အအုံအပေါ်မူတည်နေသည်။
အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Coughlin Associates မှသံလိုက်တိပ်ခွေများကကောက်ယူဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုအပေါ် 2016 မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုအမည်ခံစစ်တမ်းအရ (စ HDDs ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ) HDDs နှင့်ကွန်ယက်သိုလှောင်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်မြင်သာထင်သာ archive ကိုမီဒီယာ, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်တန်းသားများကိုလေ့လာသူတို့မိုဃ်းတိမ်၌အချို့သိမ်းဆည်းလုပ်နေခဲ့ညွှန်ပြ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းများတွင် 38.1% သာ 2016% သည်လက်ရှိတွင်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်၌၎င်းတို့၏မော်ကွန်းတိုက်သိမ်းဆည်းထားပေမယ့်သူတို့2အတွက်သိမ်းဆည်းများအတွက်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်ကိုအသုံးပွုရကပြောပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမသံသယ AWS, Google နှင့် Microsoft archive ကိုသိုလှောင်မှုအတွက်မိုဃ်းတိမ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုတိုးမြှင့်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ 2017 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစစ်တမ်းနေဆဲသင်တန်းသားများကိုယူပြီးကြောင်းသတိပြုပါ။ မီဒီယာနှင့် Entertainment ကအသက်မွေးဝမ်းဒီ link ကို အသုံးပြု. ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် www.surveymonkey.com/r/FPRW6Y5
အဆိုပါ 2017 မှာ display ကိုအပေါ်အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိမ်းဆည်းသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အချို့ကိုကြည့်ကြရအောင် NAB ပြပွဲ.
XenData တစ်ခုတည်း server ပေါ်မှာက Shared disk ကိုသိုလှောင်မှုနဲ့ archive ကိုပေါင်းစပ်ကြောင်းယင်း၏ FX-စီးရီးစနစ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 4K Workflows များအတွက်သင့်လျော်သောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် shared disk ကိုအသံအတိုးအကျယ်, ကာပူးတွဲ LTO စာကြည့်တိုက်ကိုထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းတစ်ခု archive ကိုအသံအတိုးအကျယ်တစ်ဦး Optical ပူးတွဲ: အဆိုပါ All-In-One server ကိုနှစ်ခုလွတ်လပ်သောသိုလှောင်မှု volumes ကိုကမ်းလှမ်းစဉ်သိသိသာသာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှု Workflows ရိုးရှင်းစေရန်ကူညီပေးသည် disc မော်ကွန်းတိုက်စာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ် Microsoft က Azure cloud storage ။ ဒါကြောင့်အစဉ်အလာမျိုးစုံက Shared disk ကိုသို့မဟုတ် archive ကိုသိုလှောင်မှု volumes ကိုနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သိုလှောင်မှုနယ်နိမိတ်ကိုရှောင်အဖြစ်နှစ်ခုကိုဖြည့်စွတ် High-စွမ်းရည် volumes ကိုတင်ပြခြင်းအားဖြင့်, အ FX server ကို Workflows ရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်တမ်'' s ကို StorNext6ယင်း၏အသုံးများဖိုင်စနစ်နှင့်ဒေတာများစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့အဆင့်မြင့်ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းစပ်။ ဤရွေ့ကားတိုးမြှင့်ဒေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်များ FlexSync (စဉ်ဆက်မပြတ်အကြောင်းအရာထပ်တူ), FlexSpace (Multi-ပထဝီက Shared archive ကို) နှင့် FlexTier (automated အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကမိုဃ်းတိမ်ကိုလက်လှမ်း) တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ update ကိုလည်း bandwidth ကိုအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ, bandwidth ကိုကြိုတင်မှာယူမှုအပါအဝင်န်ဆောင်မှုများကို client ကိုအခြေခံပြီးအရည်အသွေးကိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ SAN နှင့် DLC client များအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်နဲ့ web service ကို API ကိုထောက်ခံမှုရပါလိမ့်မယ်။
XenData ရဲ့တိမ်တိုက် Gateway မှာ File နှစ်ခုကိုသိုလှောင်မှုအလွှာကိုဖြတ်ပြီးတစ်ခုတည်းအလွန်အမင်းအရွယ်မှာဖိုင်စနစ်ကစီမံခန့်ခွဲ: On-ဝုဏ် RAID နဲ့ Microsoft Azure မိတ်ဆွေအတွက် blobs သိုလှောင်မှု။ အဆိုပါသိုလှောင်မှုစနစ်ရှိပြီးသားဖိုင်ကို-based application များပြုပြင်မွမ်းမံဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲ Cloud သိုလှောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ၎င်း၏ tier မူဝါဒများမိုဃ်းတိမ်ကို access ကိုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အင်တာနက် bandwidth ကိုအသုံးပြုမှု minimize လုပ်ရသောဒေသခံသိုလှောင်မှုအပေါ်မကြာခဏဖတ်ရှုဖိုင်များ, ကိုစောင့်ရှောက်။
Western Digital ကအဆိုပါကြေညာခဲ့သည် HGST Active ကိုမော်ကွန်းတိုက်စနစ်, ထို ActiveScale P100 နှင့် X100 ထည့်သွင်းရန်ထုတ်ကုန်များ၏မိသားစုအတွင်းပထမဆုံး, အဖွင့်နေသည်Ecole Polytechnique Fédéraleက de Lausanne(EPFL), တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတ, ဗီဒီယို, နှင့်ချက်ချင်းပျော်မွေ့ဖို့ Montreux ဂျက်ဇ်ဂီတပွဲတော်ကနေအချက်အလက်များ၏ 17,000 နာရီ '' ကျိုးနပ်ထက်ပို archive လေ့လာမှုနှင့်ကောင်းစွာအနာဂတ်မှာသို့အကြောင်းအရာနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်။ တိပ်ကနေဒစ်ဂျစ်တယ် format ကိုပြောင်းနှင့်ပေါ်သိမ်းဆည်းထား HGST Active ကိုမော်ကွန်းတိုက်စနစ်, ထိုဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ထောက်ပံ့ဒေတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်နည်းပညာအတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားခြင်း, Real-time နှင့် On-demand အလွယ်တကူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, EPFL မှာသိသိသာသာသုတေသနနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာတိုးတက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့။
၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်Montreux ဂျက်ဇ်ဂီတဒစ်ဂျစ်တယ်စီမံကိန်းတစ်ဦး HGST Active ကိုမော်ကွန်းတိုက် System ကိုစတိုးဆိုင်များနှင့်နောက်ကျော 1967 ဖို့ခြိနျးတှေ့ဖျော်ဖြေပွဲအမျိုးမျိုးကနေတိုက်ရိုက်လွှဗီဒီယိုနှင့်အသံသွင်းထားကယ်တင်တတ်၏။ အဆိုပါအသံသွင်း 18 ဖျော်ဖြေပွဲထက်ပိုထံမှအသံများဗီဒီယိုနှင့် 11,000 နာရီ 6,000 နာရီခန့်ဖမ်းယူဖို့အသုံးပြုခဲ့ 5,000 ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာကို formats span ။ အဆိုပါ archive ကိုအစဉ်အဆက်ဖန်တီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတရိုက်ကူးအရှိဆုံးပြည့်စုံစုဆောင်းခြင်းနှင့် Montreux ဂျက်ဇ်ဂီတပွဲတော်မှာဖျော်ဖြေကြပါပြီအားလုံးအဘယ်သူကို၏ Marvin Gaye, အဲလာ Fitzgerald, BB ဘုရင်, ဂျော်နီငွေ, Deep Purple, အဲရစ် Clapton နှင့်ထို့ထက် ပို. ကနေဂန္ဖျော်ဖြေပွဲပါရှိသည်။ ဂီတနှင့်ဗီဒီယိုသိမ်းဆည်း၎င်း၏ 50 နှစ်ပေါင်းအသိအမှတ်ပြုမှုမှာတော့စုဆောင်းခြင်း 2013 အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားအစီအစဉ်၏ယူနက်စကိုမှတ်ဉာဏ်စစျထဲမဝငျခဲ့သည်။
StorageDNA မှာအောက်ပါကြေငြာခဲ့သည် NAB ပြပွဲ:
DNAevolution 4.0 ၎င်း၏ဆန်းသစ် LTO LTFS archive ကိုအင်ဂျင်၏နောက်ဆုံးပေါ် software ကိုဗားရှင်း,သောမီဒီယာ Workflows အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်စီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်
automated လွန်စွာလိုလားသော®နှင့်ကို Adobe®စီမံကိန်းကို backup လုပ်ထားနှင့်သိမ်းဆည်း
နယူး LTO LTFS ကိုက်ညီခြင်းနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Workflows restoreနည်းပညာမိတ်ဖက်များက enabled,MOG Technologies က
DNAevolution Infinity စီးရီး,မီဒီယာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ဒေတာများစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တစ်ဦးပေါင်းစည်း LTO LTFS software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲဖြေရှင်းချက်
Facilis နှင့် StorageDNA ဘယ်မှာဖန်တီးမှုမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်မှာအဘို့အမျှဝေသိုလှောင်မှုနဲ့ LTO LTFS သိမ်းဆည်းနည်းပညာပေါင်းစပ်ခြင်း။ StorageDNA ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ LTO LTFS နည်းပညာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် archive ကိုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု streamlines နှင့် LTO တိပ်ကနေအဆင့်မြင့်မီဒီယာ Workflows ပေးထားပါတယ်။
SGL NAB 2017 မှာ FlashNet ၎င်း၏အဓိကဗားရှင်းသစ်ကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပုဂ္ဂလိကမိုဃ်းတိမ်ကိုသိမ်းဆည်း, ဘက်ပေါင်းစုံအမေဇုံမိုဃ်းတိမ်ကိုသိမ်းဆည်း၎င်း၏ထောက်ခံမှုမီးမောင်းထိုးပြ S3-based အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှု-based နဲ့ Sony က'' Ci မီဒီယာမိုးတိမ်ပလက်ဖောင်း့။ မိုဃ်းတိမ်ကိုဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီများနှင့် SGL ရဲ့အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးဟာအသစ်သို့ workflow နှင့်ပိုမိုအားကောင်းရေးကိရိယာများနှင့်အတူမီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းပေးပါသည်။ ဤသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမှန်ကန်သောအရပ်မှစေလွှတ်သောသေချာဒါပေမယ့်လည်းထုတ်လွှင့်သည်မိုဃ်းတိမ်နှင့်ထံမှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းထားနှင့် retrieve မှစျေးနှုန်းအထဲကအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့လမ်းကိုကယ်တင်မသာ။
ဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများယုတ္တိဗေဒ '' BlackPearl convergence သိုလှောင်မှုစနစ်တစ်ခုတည်းဖြေရှင်းချက်သို့မျိုးစုံသိုလှောင်မှုပစ်မှတ်နှင့်အတူ NAS နှင့် S3-based interface တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးနေဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ချဉ်းကပ်ပေးသည်။ မြောက်မြားစွာတစ်ပြိုင်တည်းပါ Workflows များအတွက်ဒီဇိုင်း, BlackPearl သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း client နှင့်ရိုးရှင်းသောဖိုင်တစ်ပန်းတစ်အကွာအဝေးနှင့်အတူ SPECTRA S3-based interface တွေကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်စျေးကြီး Third-party data တွေကိုတစ်ပန်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းလျော့နည်းစေသည်။
အဆိုပါ SPECTRA BlackPearl Eon Browser ကိုဖောက်သည်လွယ်ကူစွာတစ်ဦး BlackPearl တံခါးပေါက်တစ်ခုအိမ်ရှင်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကွန်ယက်ရှယ်ယာအပေါ်ဒေတာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုသဖြင့်, တံခါးပေါက်ကနေပြန်ဟာ host ကွန်ပျူတာအချက်အလက်တွေကိုကူးယူကြောင်းရိုးရှင်းတဲ့ graphical interface တစ်ခုပေးပါသည်။ အဆိုပါဂိတ်ဝေးမှပြောင်းရွှေ့ဖို့ဒေတာလုပ်နိုင်သောဒေတာ transfer ရိုးရှင်းစွာအရာသိမ်းဆည်းခြင်း, tape- သို့မဟုတ် disk ကို-based လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။
DDN က၎င်း၏က၎င်း၏အသစ်ကတိုးချဲ့ ObjectAssure data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝင် WOS အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့်အောက်ပိုင်း archive ကိုနဲ့ Disk backup လုပ်ထားကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချက်အလက်-လွှဲပြောင်းအမြန်နှုန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် outperform အများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်ကို S3 Multi-site ကိုဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
တိုးချဲ့ ObjectAssure ဒေတာ-ကာကွယ်မှုရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးပေး, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းဖောက်သည်ရွေးချယ်မှုချဲ့ထွင်။ WOS ရဲ့အနိမ့် overhead ကုန်ကျစရိတ်တိပ်သိုလှောင်မှုအခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ယှဉ်ပြိုင်ပါစေ။ ဒါဟာအစပိုမြန် drive ကိုမအောင်မြင်မှုများတစ်ဦးပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်သက်ရောက်မှုစဉ်အတွင်းဒေတာဆုံးရှုံးခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချကြောင်းကြိမ်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
မော်ကွန်းကြွယ်ဝသောမီဒီယာများအတွက်နောက်ဆုံး repository ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မော်ကွန်းတိုက်မကြာခဏအကြောင်းအရာ access ကိုများနှင့်ဖြန့်ဝေကူညီပံ့ပိုးရန်အကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်အဖြစ်ပြုမူကြောင်း "တက်ကြွမော်ကွန်းတိုက်" ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားမော်ကွန်းတိုက်တစ် passive လုံခြုံအကြောင်းအရာ repository ကိုထက်ပိုမိုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည်အခြားသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ထက်ကားအောက်ပိုင်းသိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်မှာပိုမိုမြင့်မားအောင်းနေချိန်နှင့်အတူဒေတာထောက်ပံ့။ ခေတ်မီသောဗီဒီယိုစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုသောကြွယ်ဝသောမီဒီယာ၏တိုးမြှင့်ငွေပမာဏနှင့်အတူဤအကြောင်းအရာ repositories ကအစဉ်အဆက်ပိုကြီးဖြစ်လာစေရန်နှင့်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပုံစံများကိုထောကျပံ့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
 မီဒီယာနှင့် Entertainment ကစစ်တမ်း, Coughlin Associates မှခုနှစ်တွင် 2016 ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်။ www.tomcoughlin.com
သောမတ်စ်အမ် Coughlin, သမ္မတ, Coughlin Associates မှတစ်ကျယ်ပြန့်လေးစားသိုလှောင်မှုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါတယ်။ သူကဒေတာသိုလှောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 30 နှစ်ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒေါက်တာ Coughlin ကသူ၏အကြွေးဖို့အများကြီးစာပမြေားနှငျ့ခွောကျမူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ တွမ်ကိုလည်း၏ရေးသားသူဖြစ်ပါသည် စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်: အဆိုပါမရှိမဖြစ်လမ်းညွှန်, Newnes Press ကထုတ်ဝေခဲ့သည်။ တွမ်ဟာထုတ်ဝေ ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်ရေးနည်းပညာသတင်းလွှာ, မီဒီယာအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုအစီရင်ခံစာ, နှင့်အခြားအစီရင်ခံစာများ.
တွမ် SNIA နှင့်အတူတက်ကြွစွာဖြစ်ပါသည်, SMPTE, ကို IEEE နှင့်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းများ။ သူ SNIA Solid State သိုလှောင် Initiative များအတွက်ပညာရေးသဘာပတိဖြစ်ပါတယ်။ သူကအနာဂတ်အတွက်ကို IEEE စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဦးတည်အဖြစ်ကို IEEE ဒေသကြီး6များအတွက်ဒါရိုက်တာ၏သဘာပတိဖြစ်ပါတယ်။ သူကအီး Society က bog တစ်ဦးနှစ်ရှည်လများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, နှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့စစ်ဆင်ရေး၏ဒုတိယသမ္မတဖြစ်ခဲ့သည်။ တွမ်တည်ထောင်သူနှင့်စည်းရုံးရေးမှူးနှစ်ပတ်လည်သိုလှောင်ရူပါရုံညီလာခံ၏အဖြစ်ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံဖြစ်ပါတယ်။ သူကနှစ်စဉ် Flash ကိုမှတ်ဉာဏ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏အထွေထွေဥက္ကဌဖြစ်ပါတယ်။ တွမ်နောက်ထပ်မှာ: www.tomcoughlin.com
သောမတ်စ် Coughlin အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာမော်ကွန်း Solutions - ဇွန်လ 16, 2017
WDC အလုပ်အမှုဆောင်ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံ (SM) မှာဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာလုပ်ငန်းအသွားအလာအပေါ် Keynote ကယ်ယူမှ - မေလ 17, 2016
2016 သိုလှောင်ရူပါရုံညီလာခံတင်ပြတင်ပြမှုကိုနောက်ဆုံးစက်တင်ဘာလ 14 ဖြစ်ပါသည် - စက်တင်ဘာလ 1, 2015
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit က Ultra HD ဖိုရမ်	2017-06-16
ယခင်: အသံ Solutions ကိုခိုင်ခံ့စေရန် ASG ငှားရမ်းတွမ် Menrath
နောက်တစ်ခု: Office ကိုလက်ထောက် - အားလုံးအရောင်းအများပေါက်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ပု 2017 NAB Show မှာမော်ကွန်း Solutions" ။ http://www.broadcastbeat.com/archiving-solutions-at-the-2017-nab-show/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။